Chii chekupa yePasika - Zvipo gumi zvepamusoro | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Isita izororo guru revatendi. Wese munhu arikutarisira kuburuka kweMweya Mutsvene, achigadzirira makeke anonaka uye mazai pamberi, akapendwa mune inopenya mavara. PaIsita, itsika kupa zvipo kune vaunoda. Uye haangori mazai chete. Isu tinokupa iwe gumi echipo mazano ezororo reKumuka kwaKristu.
Huku dzeIsita nemabhanzi
Nhasi, zviyeuchidzo zvakadaro zvinounzwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Zvigadzirwa mune shabby chic chimiro zvinotaridzika zvakapfava. Uyezve, zvakadaro unogona kugadzira chipo iwe pachakokana paine nguva uye chishuwo. Huku nehuku, semazai pachawo, ndizvo zviratidzo zvikuru zveIsita. Naizvozvo, matoyi akadaro anogona kupihwa zvakachengeteka kwete chete kune hama, asiwo kushamwari.
Wreaths uye Easter nziyo sechipo
Isita wreath uye nziyo dzerunako runoshamisa dzinopihwa nemasters paInternet nezvitoro zvepamhepo. Ichi ndicho chipo chaicho chinoshandura imba kuita zororo uye nekupa yakasarudzika mamiriro ekudziya, nyaradzo uye mutsa.
Chipo chinodyiwa cheIsita mhinduro hombe kune avo vanoda kufadza jino rinotapira. Inogona kunge iri zviwitsi, makuki kana chingwa cheginger, chakagadzirwa muchimiro chezai uye chakapendwa zvine glaze. Zviya, yevana iwe yaunogona kutenga kufambira mberi chokoreti mazai. Vanozokoshesa chipo chakadai.
Napkins uye mahengechepfu
Ichi chipo chakanaka kune wese munhu. Mushure mezvose, napkins uye zvitsvuku zvinodiwa nemunhu wese uye nguva dzose. Mahengechepfu ane micheka yakashongedzwa yemaruva anowanzo kutengeswa mumaseti. Uye ivo vatove vakavharwa zvakanaka. Naizvozvo, iwe haufanire kufunga nezve kurongedza yakadaro mharidzo.
Tafura yeIsita inogara yakashongedzwa nenzira yakasarudzika. Naizvozvo, iwe unogona kupa makenduru. Uyezve, ivo vanogona kuve eakasiyana maitiro uye mavara. Munguva pfupi yapfuura, makenduru akavezwa nemaoko nemakenduru ane hwema ari kuwana mukurumbira.
Kushongedza nezviratidzo zveIsita
Iyo haifanire kunge iri muchinjikwa kana chiratidzo chemuviri. Iwe unogona kupa, semuenzaniso, pendende muchimiro chetsoka yetsuro inounza rombo rakanaka.
Chirangaridzo Easter mazai sechipo
Tinochinjana mazai akabikwa kumba. Asi iwe haugone kupa kwete chete yakabikwa, asiwo chirangaridzo zai rakagadzirwa nevhu, huni, papier-mâché kana marozari. Chiyeuchidzo chakadai chichagara kwenguva yakareba kwazvo uye chinoshongedza chero chemukati
Sipo yakaitwa nemaoko
Yakagadzirwa nemaoko inonhuhwirira sipo inogona kurairwa kubva kune vazhinji vanoita sipo pamhepo. Tsuro dzesipo, huku nemazai zvichaita yakanaka seti yechigadzirwa chakakodzera zuva rega rega.
Yakagadzirwa nemaoko sipo sechipo cheEaster
Potholders sechipo cheIsita
Ivo vanogona kuve vakasiyana kwazvo: kubva kumachira kusvika kune dzakarukwa nemaoko. Zvirinani kupa chipo ichi kuna amai kana mbuya. Ivo vanonyatso kufadzwa neyekugadziriswa mukicheni.
Pakati pebhasikiti, ive shuwa yekuisa kulich... Zvese zvimwe zvinogona kusarudzwa zvakazvimiririra, zvichibva pane zvinodiwa nemunhu uyo ​​chipo chakanangwa. Inogona kunge iri mabanzi, zvihwitsi, Gingerbread Cookie uye zvimwe zvakawanda.
Izvi zvipo zvinonyatso kufadza vadiwa vako, zvinokufadza uye kugadzira mamiriro emafaro.
Kugadzirira Isita: chokoreti keke nekunakirwa kuravira - nzira
DIY Easter bunnies - tenzi kirasi
Mibvunzo ye63 mu database yakagadzirwa mu 0,676 masekondi.